Qatar Airways waxay soo bandhigtay diyaaradii ugu horeysay ee FIFA World Cup Qatar 2022
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways waxay soo bandhigtay diyaaradii ugu horeysay ee FIFA World Cup Qatar 2022
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • News • Sports • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways, Wada-hawlgalaha Rasmiga ah iyo Shirkadda Duulimaadka Rasmiga ah ee FIFA, ayaa maanta soo bandhigay diyaarad si gaar ah u calaamadeysan Boeing 777 oo lagu rinjiyeeyay FIFA World Cup Qatar 2022 livery, si loogu calaamadeeyo laba sano oo ka harsan inta uu tartanku bilaabmayo 21-ka November 2022.
Diyaaradda loo yaqaan 'bespoke', oo ay ka muuqato FIFA World Cup Qatar 2022 calaamadeynta ayaa gacmo lagu rinjiyeeyay si loo xuso iskaashiga shirkadda ay la leedahay FIFA. Diyaarado badan oo ka mid ah diyaaradaha Qatar Airways ayaa soo bandhigi doona Koobka Adduunka FIFA Qatar 2022 waxayna booqan doontaa dhowr meelood oo shabakadda ah.
Boeing 777-300ER waxay adeeg ka bilaabi doontaa 21-ka Nofeembar duulimaadyada duulimaadyada QR095 iyo QR096 ee u dhexeeya Doha iyo Zurich. Wadadii ugu horeysay ee diyaarada duulimaadka ah waxay mar kale ku celineysaa sida ay shirkada uga go'antahay iskaashiga FIFA iyada oo u duuleysa guriga FIFA ee Switzerland taariikhdan xuska leh.
Madaxa shirkadda Qatar Airways Group, Mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan u dabaaldegno iskaashiga aan la leenahay FIFA iyo heerka Qatar ee martigalinta Koobka Adduunka FIFA Qatar 2022 anagoo u soo bandhigeyna diyaaradan gaarka ah maraakiibtayada. Haddaan nahay Saaxiib Rasmi ah iyo Diyaaradda Rasmiga ah ee FIFA, waxaan dareemi karnaa dhismaha xiisaha leh iyadoo ay labo sano naga harsantahay illaa aan dunida ku soo dhoweyno dalkeenna quruxda badan.
“Diyaar garowga Qatar ee martigelinta FIFA World Cup Qatar 2022 waa iska cadahay hareerahayaga oo dhan. Qatar Airways, shabakadeena waxay dhowaan ku fidday 100 meelood, waxayna sii kori doontaa in ka badan 125 meelood marka la gaaro Maarso 2021, iyadoo sii kordheysa oo awood u siinaysa rakaabkeennu inay safraan markay doonaan adduunka oo dhan, si ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo. Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Hamad, Lamaanaha Rasmiga ah ee Garoonka Koobka Aduunka FIFA Qatar 2022, u diyaargarowga koritaanka taraafikada ee la filayo ayaa si habsami leh u socda. Mashruuca ballaarinta garoonka ayaa kordhin doona awoodda in ka badan 58 milyan oo rakaab ah sanadkii 2022. ”
Qatar Airways Madaxweyne Ku Xigeenka Suuqgeynta iyo Isgaarsiinta Shirkadaha, Marwo Salam Al Shawa, ayaa intaa ku dartay: “Qatar Airways waxay ku faraxsan tahay inay sii wado safkeeda ay ku taageerayso tartamada FIFA iyo FIFA World Cup Qatar 2022 hada labo sano ayaa naga dhiman, waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay soo bandhigida diyaaradan quruxda badan. ”
Gudiga sare ee gaarsiinta iyo xoghayaha guud ee FIFA iyo FIFA World Cup Qatar 2022 LLC, mudane Hassan Al Thawadi, wuxuu intaa ku daray: "Markaan ku soo dhawaano labada sano illaa iyo bilowga taariikhda 21-ka Nofeembar, waa wax aad u wanaagsan inaan aragno la-hawlgalayaasha kale ee gudbinta tartanka. sida Qatar Airways waxay gaaraan ujeedooyin muhiim ah oo ay leeyihiin Qatar 2022. In la arko FIFA World Cup Qatar 2022 oo daboolaysa diyaarad dhan waa daqiiqad xiiso u leh qof walba oo ku lug leh gudbinta tartankan taariikhiga ah iyo tallaabo muhiim u ah dhiirrigelinta waddadeena sanadka 2022. Waxaan rajeyneynaa in muujintaani ay gacan ka geysaneyso xiisaha taageerayaasha rajada ah in halkaan lagu duulo Diyaaradan labo sano gudahood markii ugu horeysay FIFA Koobka Aduunka ee Bariga Dhexe iyo Carabta waxaana rajeyneynaa inaan soo dhaweyno qof walba oo yimaada Qatar. ”
Agaasimaha Suuqgeynta FIFA, Jean-François Pathy, ayaa yiri: “Saaxiibkeena Rasmiga ah Qatar Airways oo bilaabaya diyaaradan cajiibka ah ee muuqaalka leh ee lagu muujinayo Koobka Aduunka FIFA Qatar 2022 waa muhiim muhiim ah. Waxaan sugeynaa inaan soo dhaweyno taageerayaasha daafaha adduunka si aan u soo aragno Koobka Adduunka ee FIFA unique iyo inaan soo helno Qatar labo sano gudahood. ”
Qatar Airways, oo kaashaneysa fasaxyada Qatar Airways, ayaa dhawaan bilaabi doonta xirmooyinka safarka ah ee loogu tala galay booqashada Qatar ee Koobka Adduunka FIFA Qatar 2022.